NYI LYNN SECK 18+ DEN: Scenario
Posted by NLS at 12/05/2010 01:23:00 AM
21 Responses to “Scenario”
Scenario ၂၅ နဲ့ ၂၆ ကို ကြိုက်တယ်ဗျာ။ ကိုညီလင်းဆက် စတိုင်ပဲပေါ့။
(အခု ကွန်မန့်ပေးရတာ ကျနော့်အတွက်တော့ လွယ်သွားပြီ။ အရင်က ကျနော်ပေးဖို့ကြိုးစားတာ အဆင်မပြေလို့ သိပ်မပေးဖြစ်ဘူး။)
ပုံပြင်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အဲဒီလို သမာရိုးကျ အတွေးတွေကနေ ခွဲထွက်လာတဲ့ အတွေးမျိုးတွေကို သဘောကျတယ်။
မတူတဲ့ထောင့်က ပုံပြင် အတွေးကို ကြိုက်တယ်။
နေပြည်တော်-ရန်ကုန်လမ်းမှာ ကားaccidentတွေ ဖြစ်လို့ ပြီးခဲ့တဲ့လက သူငယ်ချင်းတယောက်၊ ဒီလ အမျိုးတယောက် ဘဝကူးသွားတယ်ဗျာ။
ဇွန်တို့အိမ်က အမေနဲ့မောင်လေးလည်း မဲပေးဖို့သွားတော့ သူတို့နာမည် (ဇွန်တို့တစ်မိသားစုလုံး) စာရင်းမပါလို့ မပေးခဲ့ရပါဘူးတဲ့။
DDOS ဆိုတော့ *Distributed* DOS attack ကို ဆိုတာ ထင်တယ်။
ကျွန်တော် နားလည်တာကို *ဥပမာ*ပေးပြီး ပြောရရင် ကိုညီလင်းဆက်က "တိုက်တဲ့ကောင်" ဆိုရင် ကိုညီလင်းဆက် စက်ကနေ Request တွေ အဆက်မပြတ်လွှတ်ပြီး တိုက်တာမျိူးမဟုတ်ပဲနဲ့ *ဥပမာ* ကိုညီလင်းဆက် ဘလော့လာဖတ်တဲ့ သူတွေရဲ့ စက်ထဲကို Progam တစ်ပုဒ် သူတို့ မသိအောင် ထည့်ပေးလိုက်မယ်။ စာဖတ်သူတွေကလည်း အရာ အထောင် ကမာအနှံ့မှာ ရှိပြီး ထားပါတော့ မြန်မာ စံတော်ချိန် မနက် ၉ နာရီထိုးတာနဲ့ အဲဒီ ကွန်ပြူတာတွေက ပိုင်ရှင်တွေတောင် မသိဘဲနဲ့ Request တွေ အဆက်မပြတ်လွှတ်ပြီး တိုက်တာမျိူးပါ။ ပိုပြီး ပြင်းထန်တယ်။ "တိုက်တဲ့ကောင်" ဘယ်သူလဲ ဆိုတာ သိဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ အခုလို "National Bandwidth ထက်ကိုများ တိုက်တဲ့သူက ပိုများများ သုံးနိုင်" တယ် ဖတ်ရတာ "တိုက်တဲ့ကောင်"က ကိုယ့်စက်ကိုယ် ကိုယ့် Bandwidth ကို သုံးပြီး တိုက်ရလောက်အောင် အင်မတန် ပေါချာပါလား တွေးမိတယ်။
သမရိုးကျ ပုံပြင်တွေ အများကြီးပါပဲ..ပုံပြင်တွေ ခုလိုတွေးပြတာ သဘောကျတယ်
In this story, that young man was lack of sincerity to express his master’s name that unclear consciousness caused immediate failure.
I agreed upon pupil should clever than master said by Sayagyi U Pe Mg Tin, first Myanmar national principal of Yangon Univ. for sake of progressive future in every field.
However, it does not mean the irrespective to teacher.
Zaw Wonna said...
Scenario လေးတွေကို သဘောကျမိပါတယ်။
You areasharp look out.
ကို ညီလင်းဆက် ကျမက ကိုညီလင်းဆက်ဘလော့ ကို အမြဲဖတ် လေ့ရှိသူတစ်ယောက်ပါ ။ အခု ကိုညီလင်းဆက် ရဲ့Scenario 15 က 26 အထိကို သဘောကျလို့ ကျမ facebook မှာတင်လိုက်ပါတယ်။ ခွင့်တောင်းတာပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အားလဲကျပါတယ်။
၂၅ နဲ့ ၂၆ လိုမျိုး တလွဲကြီးတွေ လိုရာဆွဲပြောထားတဲ့ ပုံပြင်ပေါင်းများစွာကို စိတ်ပျက်နေတာ ကြာပါပြီ.... ရာမဇတ်ထဲက သိမ်းဂို ( စာလုံးပေါင်းသီးခံ) ဆိုတာ ယနေ့ခေတ် သီရီလကာင်္မှန်တာသေချာတယ် ဆိုရင် ... ဘီလူးတွေဟာ ရုပ်ဆိုးဆိုး သီဟိုသားတွေကို တင်စားတာ မဖြစ်နိုင်ဘူးလား.... ဟိုခေတ်စာရေးဆရာတွေ ရဲ့ ထုံးစံကကို ချဲ့ကားပြောမှ စာတတ်ပေတတ်လို့ အထင်ရောက်နေကြပုံပဲ... နောက်ဆုံးတော့ ရာဇဝင်သမိုင်းတွေမှာလဲ အစစ်ဆိုတာ ရှားနေပြီ...
ကိုယ်တိုင်တောင် မတွေးမိတဲ့ အမြင်တွေဖြစ်နေတာလေးကို ထွင်းဖောက်ပြီး တွေးတတ်သူတစ်ယောက်မို့ လေးစားပါတယ်...
အထူးကျွမ်းကျင် သော ဘလော့ဂါ ရဲ့ စာမျက်နှာ တွေ မှာ စာလုံးပေါင်းတွေ ကြည့်ရတာ အဆင်မပြေဘူး။ ရေးချ တွေ လွဲ နေတာ ဘာကြောင်. လဲ? ပါ အစား ဟ ဖြစ်နေတယ်။ ပ ဆင့် စာလုံး တွေ ဖတ် လို့မရဘူး။ ကျနော့ ဆီမှာ font မရှိ လို.လား? ဘာလုပ်ရမလဲ? ပြောပြပါ။
ဘလော့ဂါ အကျော်အမော် တယောက်အနေနဲ့ မြန်မာစာ၊စကား ကို လေးစားသောအားဖြင့် "ပာ" အစား "ပါ" လို့ ကြိုးစားရေးပေးစေချင်ပါတယ်။
To Mg win & shweNaw,
pls download and install Zawgyi 2009 at the right side of the home screen..
it wil help u to read correct spelling..
ကားဘီးတွေကို balancing properly မလုပ်ထားရင် high speed မောင်းတဲ့ အခါ တုန်ခါတာ၊ အသံမည်တာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဘီးတလုံးစီမှာ လိုအပ်သလို ခဲအလေးတုံးလေးတွေ တပ်ထားရပါတယ်။
balancing လုပ်တဲ့စက်ကတော့ လိုတာပေါ့ဗျာ...
25 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းပြောကြည့်ချင်တယ်။ နွားကျောင်းသားက ဆရာမရှိဘူးလို့ပြောတော့ ဒီပညာဟာ သူကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသိခဲ့တဲ့ ပညာလား။ဒါမှမဟုတ် အခြားတစ်ယေက်ရဲ့ ပညာကိုအခြေခံပြီး တတ်ခဲ့တာလားဆိုတာသိသင့်တယ်။blog တစ်ခုရေးမယ်ဆိုရင် ဘက်ပေါင်းဆုံကကြည့်ပြီးေ၇းသင့်တယ်။